Rosia: Hetsi-panoherana Faobe Tany Amin’ireo Masoivoho Rosiana Ho Fanamarihana Ny Andro Eran-tany Natokana Ho An’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy
Rosia: Hetsi-panoherana Faobe Tany Amin'ireo Masoivoho Rosiana Ho Fanamarihana Ny Andro Eran-tany Natokana Ho An'ny SIDA
Voadika ny 11 Janoary 2012 5:33 GMT
Vao tsy ela akory ireo mafana fo avy ao amin'ny ” Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine (ASTAU)” no nandefa ny famintinana fohy ny hetsika farany indrindra nanamarihana ny Andro Eran-tany Natokana Ho An'ny SIDA manerana izao tontolo izao. Ny tena nisongadina indrindra tamin'ireo fandalinana dia ny fifamoriana niaraka tany amin'ireo Masoivoho Rosiana maneran-tany ho fanoherana ny fomba fitondra feno herisetra sy habibiaba atao amin'ny olona miaina miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina ao Rosia. Ireo hetsika dia natao tao Londona, Stockholm, Berlin, Bucharest, New York, Sidney, Canberra, Barcelona, Berlin, Toronto, Mexico ary Tbilisi. Ny “International Network of People who Used Drugs (INPUD)” na ny Tambajotra Ara-tsosialy Iraisam-pirenena Ho An'ny Olona Mampiasa Zava-mahadomelina sy ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa no niara-nandrindra ny fihetsiketsehana natao. Ny andinindininy amin'ny Fitokonana tao Amin'ny Masoivoho Rosiana izay nantsoina hoe: “Shame, Russia, Shame” n, Rosia, henatraa “Henatra”dia notaterina tao amin'ny bilaogy manokana natokana ho an'ilay hetsika. Tatitra lehibe iray ihany koa no navoaka tao amin'ny pejin'ny tranonkalan'ny INPUD.
Ny Fitokonana tao Amin'ny Masoivoho Rosiana ihany koa dia nambara tamin'ny tapaky ny volana Novambra rehefa namoaka ny antso ho an'ny Governemanta Rosiana ny INPUD mba hanovan'izy ireo ny fihetsiny manoloana ireo olona mampiasa zava-mahadomelina sy ny fandaharan'asa ho fampihenàna ny dona toy ny “fanakalozana fitsindrona” ary ny “opiate replacement therapy”(ORT), na Fitsaboana Fanolo ny Zava-mahadomelina. Naverin'ny loharanon'ny tranonkala ASTAU navoaka indray ilay antso mba ho mariky ny firaisankina amin'ireo Rosiana namana.
Nanambara ilay antso fa ny fomba fitondran'ny governemanta Rosiana ireo mampiasa zava-mahadomelina ankehitriny dia tsy azo hamarinina akory no sady mahatsiravina izay nitarika ho amin'ny fahafatesana anarivony tamin'ny tsy misy antony. Ny tsy finiavan'ny governemanta hametraka ho ara-dalàna ny fandaharan'asa “fanakalozana fitsindrona” sy ny ORT no nahatonga ireo tolotra mety hanampy azy ireo hahatratra ny “fahasalamana tsara indrindra araka izay azo atao” tsy ho tonga any amin'ireo olona an-tapitrisa.
Araka ny hevitry ny INPUD dia tsy noraisin'ny governemanta Rosiana ny fanehoan-kevitra ara-tsiantifika iraisam-pirenena mahakasika ny fidiran'ny fandaharan'asa toy izany amin'ny fampihenàna ny fihanaky ny VIH/SIDA amin'ireo mpitsindrona zava-mahadomelina satria hatramin'ny 2005 ny fitsaboana ORT mampiasa Methadone ” sy ny ” Buprenorphine” dia tafiditra tao amin'ny “Lisitr'ireo Fanafody Fototra avy amin'ny Sampan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fahasalamana (OMS). Noho izany, ny fahazoana ireo fanafody ireo dia ampahany manan-danja amin'ny zon'olombelona.
Ny Antson'ny INPUD dia niaty antontan'isa manoritsoritra ny te-draharaha amin'ny fipariahan'ny VIH/SIDA eny amin'ireo Rosiana mpampiasa zava-mahadomelina. Araka ny INPUD, dia misy olona manodidina ny 5 tapitrisa no mampiasa zava-mahadomelina ao amin'ny firenena, 1,7 tapitrisa amin'izy ireo no mpitsindrona opiacé; amin'io isa io dia 37,2% no voan'ny VIH, ary any amin'ireo faritra sasany dia mahatratra 75% mihitsy io taha io. Araka ny angona ofisialy dia manodidina ny 80%-n'ny tratry ny VIH tamin'ny 1987 ka hatramin'ny 2008 no nisy ifandraisany tamin'ny fitsindronana zava-mahadomelina. Ny làlana haingana indrindra amin'ny fianahany dia ny fampiasàna “seringue” sy fanjaitra tsy voadio. Ny fototry ny efa ho 60%-n'ny VIH hita vao haingana tamin'ny 2010 dia ny fitaovana tsy voadio.
Mandritra izany fotoana izany indrindra, zara raha misy ny fandaharan'asa “fanakalozana fitsindrona” eo amin'ilay firenena. ONG madinika no mitantana azy ireny ary tsy maharakotra ny filàna rehetra. Tsy manohana fandaharan'asa toy izany ny governemanta Rosiana satria, araka ny Minisiteran'ny Fahasalamana Rosiana, ny fanomezana fanjaitra sy “seringue” tsy misy otrik'aretina no hampihetsika ny fiaraha-monina mba handefitra kokoa amin'ireo mpampiasa zava-mahadomelina izay mifanohitra amin'ny lalàna Rosiana, hoy ny INPUD nitatitra.
Nanambara ny INPUD fa na dia eo aza ny torolàlana nomen'ireo fikambanana iraisam-pirenena to teny, ny fandaharan'asa fampihenàna ny dona izay ahafahana mampihena amin'ny fomaba zo tsapain-tànana ny fampiasàna zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny tsindrona toy ny ORT dia mbola tsy ara-dalàna. Ambonin'izany, ny olona izay manohana ny fandaharan'asa toy izany dia raisina amin'ny fomba ofisialy ho olo-meloka. Ny toerana mbola tsy maha-ara-dalàna ny fandaharan'asa “fanakalozana fitsindrona” dia tsy dia tena mazava loatra, satria ny fandaharan'asa rehetra ho fampihenàna ny dona dia fampiroboroboana ny fandraisana zava-mahadomelina no fijerin'ny governemanta Rosiana amin'izao fotoana azy.
Ny fampiasàna ny zava-mahadomelina amin'ny endriny rehetra ho an'ny Rosiana dia atao ho toy ny heloka ary lalàna henjana vaovao manan-kery izay vao noraisin'ireo mpanao lalàna Rosiana dia mamela ny fanenjehana araka ny lalàna izay mpampiasa zava-mahadomelina . Manambara ny INPUD fa mety ho lasa anjorom-bàla ireo olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina na mihoatra aza ary mampitombo ny fihanaky ny VIH/SIDA ao amin'ny firenena.
Ny mafana fo ao amin'ny INPUD dia nandrisika ny governemanta Rosiana mba hanomboka ny fandaharan'asa ho fampihenana ny dona ikendrena ny hitondràna fanafody amin'ny fihanaky ny VIH/SIDA toy ny ORT sy ny “fanakalozana fitsindrona”, hampijato ny fanenjehana ny fampiasàna ny zava-mahadomelina ho toy ny heloka, hanome Fitsaboana Anti-Retroviral ho an'ireo mpampiasa zava-mahadomelina mitondra ny otrikaretina VIH, hampiato ny fanavakavahana ireo olona izay mampiasa zava-mahadomelina sy hanaja n y zo maha-olombelona azy ireny, hampiato ny fanenjehana ireo mafàna fo miaro ny fampihenana ny dona ka hampiditra ireo olona mampaiasa zava-mahadomelina amin'ny fananganana politika mikendry ny hanatsaràna ny fiainan'izy ireny.
Sary avy amin'i Anton Belitskiy, “Ridus” masoivohom-baovaon'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra, www.ridus.ru
Mbola ao Rosia ihany ny 1 Desambra 2011, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana atao hoe “Patients’ Cotrol” dia nikarakara famoriam-bahoaka tsy nahazoan-dàlana teo akaikin'ny tranoben'ny Ministeran'ny Fahasalamana mba hanairana azy bebe kokoa amin'ny olana misy eo amin'ny fitsaboana ny VIH ao Rosia. Nitondra vatam-paty vitsivitsy ho endri-pamantarana teo amin'ny fidirana ho ao amin'ny Ministera ireo mafàna fo, ka nisy tarika iray nanao diabe toy ny ireny handevina ireny. Ny anton'ilay famoriam-bahoaka dia ny mba hahatonga ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ho tonga saina fa ny tsy fahatomombanan'ny fitsaboana ny VIH, indrindra fa ny tsy fahampian'ny fanafody “anti-retroviral” dia nitarika fahafatesana maro tsy misy antony. Ny masoivoho “Patients’ Control” sy ny ‘Ridus” agency dia nitatitra fa nosamborin'ny polisy Rosiana ny sasantsasany tamin'ireo mpandray anjara tamin'ilay famoriam-bahoaka.